Xildhibaan Faarax Sh. Cabdulqadir “Dowladda-Dhexe uma aragto mudnaan in dadka la isla doono” – Kalfadhi
Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ka tirsan Golaha shacabka ee Baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in aaney wax wanaagsan oo la aqbali karo aaney aheyd, khilaafka hadda u dhaxeeya dowalada Federaalka Soomaaliya iyo maamul-gobolleedyada dalka ka jira.
Waxaa uu sheegay in shirkii u dambeeyay ee bishii May lagu qabtay magaalada Garoowe in lagu soo kala tegay, taasina ay ka dhigantahay in qoyskii uu wada fariisan waayo in ay dhibaato weyn tahay. Waxaa uu hadalkiisu sii raaciyay in mushkulata ay qeyb-weyn ka tahay dowladda Somaaliya oo uu sheegay in aysan u arkin mudnaan in dowladnimadu ay u leedahay in dadka la isku hayo oo la isla doono.
“Waxaa lumey kalsoonidii Shacabka ee ay u qabeen Dowlanimada, sidoo kale waxaa lagu shaqeyn waayey Dastuurkii Dalka iyo in Dalka loo gogol-xaaro doorsho qof-iyo-Cod, waxay Dowaladii labadii sanno iyo bar ay jirtey ku dhameysatey Khilaaf iyo is qabsi qabsi iyo hebel bedel”, ayuu hadalkiisu sii raaciyay.
Mudane Faarax, ayaa si weyn u ammaanay dowladdii tan ka horeysay oo uu xubin fir-fircoon ka ahaa, waxaana uu sheegay in bishii February ee sanadkii 2017, dowladda iyo maamul-gobolleedyada ay isku wanaagsanaayeen ayna wada joogeen magaalada Muqdishu balse aan lasii wadin wadashaqeyntii.
Sidoo kale waxaa uu sheegay “Dowladii hore afartii sanno ee ay jirtey, sanad kasta waxay Shaqaalleysiineysey 1200 oo shaqaalle ilaa aan gaarsiinay shan kun oo shaqaalle balse maanta, labadii sanno ee dowlada jirtey hal qof lama shaqaalleyn”.
Dowlada dhexe iyo qaar kamid ah maamul-gobolleedyada ayaa xiriirkooda waxaa uu yahay mid aan wanaagsaneyn.